SULFIL HORSE: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGA - DHIRTA DAWOOYINKA
Waa maxay sorrel faras waxtar leh
Dhibaatooyinka dadweynaha waxay ku dhufanayaan kala duwanaanshahooda iyo sahlanaanta isticmaalka. Meel kasta, beerta ama keynta oo dhan, waxaad ka heli kartaa wax kaa caawin kara dagaalka lagula jiro cudurrada iyo kahortaga. Maanta waxaannu ka hadli doonaa sifooyinka faa'iido leh sorrel faras, iyo sidoo kale contraindications in isticmaalka dhirta this.
Tani waa warshad cufan leh oo leh dhererkeedu yahay 60-120 cm oo leh dhafo qumman oo qumman. Caleemaha hoose ee sorrel faras waa weyn iyo razlohie, saddex xagal qaab ah, caleemaha sare waa yar yar. Yaryar, soo ururiyey ubaxyada ubaxyada luldhiska ah waxay u muuqdaan sarre ee xagaaga (Juun - Julaay), iyo miraha ay u bislaadaan dhammaadka Agost - horraantii Sebtembar.
Midhaha ku jira qaabka cabbirka qoyan ee 4-5 mm waxay ku dhacdaa hoosteeda "hoyga" of perianth. Sababtoo ah qaabka kiimikada kiimikada ah ee sorrel faras badanaa waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya daawada dhaqameed, laakiin sidoo kale dalab badan oo ka yimid dhakhaatiirta xirfadlayaasha.
Halabuurka kiimikada ee sorrel faras
Deriska Anthraquinone, oo ku jira kiimikada chrysophanic iyo chrysophanol, ayaa ku jira xididada sorrel faras. Waxaa sidoo kale laga helay 15% oo ka mid ah kooxda pyrocatechol, acid acids (oxalic, caffeic), fitamiin K, saliid asaasi ah, birta.
Caleemaha waxaa ku jira xaddi badan oo asiidh ah, oo ah faa'iido ugu badan bani-aadmigu waa qufac. Sidoo kale caleemaha waxaa jira carotene. Kalsiyum oxalate waxaa laga heli karaa dhammaan qaybaha geedka.
Ma taqaanaa? Qeyb ka mid ah kiimikada, sorrel faras wuxuu u eg yahay rhubarb, laakiin content of antraglycosides ee waa ka yar.
Arjiga sorrel faras ee daawada sayniska
Daawada rasmiga ah, sorrel faras sida daawo ayaa loo isticmaalaa qaabka budada iyo tincture. In daawada xirfad leh, sida caadiga ah loo isticmaalo diyaarinta sorrel faras, diyaarisay on asaasiga ah, sababtoo ah waxay ku jiraan tirada ugu badan ee nafaqooyinka.
Wixii daaweynta colitis Isticmaalka ganaaxyada iyadoo lagu daro saliidaha lagama maarmaanka ah ee sorrel faras. Wareeg loo isticmaalo si loogu daaweeyo boogaha dhiigga caloosha, dhiig kariska. Horse sorrel sidoo kale waxaa loo isticmaalaa dhibaatadaas oo kale sida cillado.
Iyadoo ay jirto ficil bakteeriyadeed, saliidaha lagama maarmaanka ah ee sorrel waxaa lagu daraa halbowlaha boogaha si loo bogsado boogaha iyo boogaha. Inta badan la isticmaalo sida calool jilciye.
Isticmaalka sorrel faras ee daawada dhaqanka
Wax ku saabsan faa'iidooyinka isticmaalka murugada faras horey u soo baratay waqti hore. Awoowayaasheennu waxay muddo dheer isticmaaleen caleemaha caleenta iyo caleemaha sida nuujiyeyaasha, si taxadar leh u xisaabinta qiyaasta: qadar yar, wakiilku "halkan ayuu ku duubayaa walxaha", iyo haddii aad qaadato qadar ballaadhan, waxay u dhaqantaa sida calool-ridid.
Si kastaba ha noqotee, nooca caloosha jilciya ayaa si fiican u dulqaadan kara carruurta diyaarinta miisaaniyadda carruurta waxay u baahan tahay in ay isticmaasho miraha sarrelka. Badanaa daawada dadweynaha, infusions sorrel ayaa loo isticmaalaa ee daaweynta hargabka iyo uumiga afka.
Wakhti dheer aabayaasheennu waxay ogaadeen in isticmaalka faleebo laga soo bilaabo xididka sorrel faras waxay hoos u dhigtaa cadaadiska dhiigga oo ku saleysan arimahaan, waxbarashadu waxay ka bilaabantay Jaamacada Tomsk taas oo xaqiijisay saameynta sorrel faras.
Hemostatic iyo qaab dhiig Noocyada sorrel faras ayaa laga helay codsigeeda daaweynta cudurrada maqaarka kala duwan: fusada ka timid dhirta waxaa loo isticmaalaa looshyo kala duwan loogu talagalay nabarradaha nadiifka ah.
Wanaagsan inaad isticmaasho sorrel faras qabowsababtoo ah waxay leedahay saameyn xoog leh.
Si loo nadiifiyo godka afka Isticmaal budada sorrel budada sorrel, kaas oo la rubbed galay cirridka ama ku luqluqo afkaaga decoction ee xididka ama soo saarista caleemaha sorrel.
Bukaanka qaba cambaarta, cudurka psoriasis ama cudurada kale ee maqaarka. u isticmaal warshad cajiib ah si aad u tirtirto maqaarka, looska.
Carruurta waxaa badanaa lagu maydhanayaa baayacmushtariyo leh caleemo faras leh, sababtoo ah waxay leeyihiin saameyn lid ku ah bakteeriyada.
Waa muhiim! Markaad isticmaasho mid ka mid ah qaababka daawada dhaqameed, oo ay ku jiraan sorrel neef, waa inaad la tashataa takhtarkaaga!
Uruurinta iyo diyaarinta alaabta ceeriin laga bilaabo sorrel faras
Hadda waxaan ognahay waxa sorrelka fardaha u wanaagsan yahay, waa wakhti lagu ogaado sida loo soo saaro alaabta ceeriin ah. Dhab ahaan qaybaha dhirta ayaa ku habboon nidaamka caafimaadka, laga bilaabo xididdada miraha.
Qalabka cagaarka ah ayaa la goostay ka dib qaybta sare ee geedka diyaar u ah "hawlgab", taas oo ah, xilliga dayrta hore. Si aad u-soo-saartid wax yar-yar oo ah "qashin-la'aan" ka hor, ka hor goynta xididdada iyo caleemaha, waa inaad soo ururisaa miraha iyo miraha.
Waxay u fiicantahay inaad iyaga ku qallajiso dibadda (2-3 maalmood) ama 10 daqiiqo foornada heerkul hoose oo ku kaydi meel gaar ah, si fiican looga ilaaliyo meel cayayaanka gudaha ah. Ka dib markii midhaha iyo miraha la uruuriyo, waxaad sii wadi kartaa inaad soo ururiso xididada.
Nidaamkani waa kan ugu muhiimsan iyo kan ugu adag. Waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u qodo geedka, dhulka ka ruxruxo rhizome, isla markiiba jarjar ama xididdada xanuunsan.
Xididdada adag ayaa la gooyaa dhererka iyo in la qalajiyo qaybta la gooyey, iyo xididdada khafiifka ah iyo kuwa dheerba waa la gooyaa oo ku riday qalajiyaha ama la qalajiyey meel meel hawo wanaagsan leh.
Ma taqaanaa? Waa suurtogal in la eego "diyaargarowga" asalka ah si fudud: haddii xididku si fudud u cidhiidhiyo, laakiin uusan jebin, waa diyaar.
Waa suurtogal in la kaydiyo walxaha cayriin ee aan diyaarin wax ka badan 3 sano. Xididku waa ka fiican yahay inuu isticmaalo hore u bislaaday, dhirta si fiican u horumarsan. Si kastaba ha noqotee, hal boos ayaa xididada laga qodi karaa 1 jeer 3-5 sano.
Horse Sorrel Quraacda
Cunto "qufac" ka soo farasaar sarrel waa mid aad u fudud, iyo ugu muhiimsan, wax kasta oo aad u baahan tahay waxaa laga heli karaa guriga. Tixgeli cuntooyinka ugu fudud uguna macquulsan diyaarinta daaweynta sorrel.
Aad u caansan waa booma sorrel oo faaruq ah, kaas oo loo diyaariyey budada rooti rooti iyo dufanka xayawaanka. Labadan qaybood waa in lagu qallalaa qaybo siman oo ku daboolan maqaarka haragga.
Waa muhiim!Ka hor intaadan dalban cadarka, waxaad u baahan tahay inaad tijaabiso: marka hore ku dhaji maqaarka caafimaadka leh oo sug 1 saac. Haddii aan la helin wax xasaasiyad ah, daaweyntu waa la isticmaali karaa.
Fudusadaha iyo decoctions waxaa loo diyaarin karaa labada xidid iyo caleemaha. Tusaale ahaan, 300 g oo ah liin la jarjaray oo la jarjaray ayaa loo baahan yahay in lagu daadsho 3 litir oo biyo ah iyo kari si aad u kululaato kulayl yar, kareyso si joogto ah.
Waa lagama maarmaan in la kariyo 20 daqiiqo, ka dibna ka qaad dabka, cadaadiska. Waa suurtogal in la isticmaalo maraq tan oo sonkor ah, iyada oo loo isticmaalo sida caleemaha shaaha oo shaah ah. Decoction noocan oo kale ah waxay noqon doontaa wax ku ool ah hypertension, cudurada gastric.
Aad loo jecel yahay "sorrel fardaha khamriga." Tincture Tani waxaa badanaa loo isticmaalaa arthritis. Labo xidid oo adag ee warshadda waa in lagu duubaa weel laba-litir ah oo ku shub hal litir oo vodka ah (waxaa fiican inaad isticmaasho dayaxa).
Faafinta xalka waa inay tahay saddex toddobaad gudahood. Iyada oo dareerahan, xoqin dhibco xanuun, ka dib markaad xoqdo meesha waa in ay ahaato "si wacan". Xanuun gaar ah oo daran, waxaad codsan kartaa cadaadis ah meesha dhibta ah.
Fudusyada iyo qiyaasaha caleemaha waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo daaweynta "dhibaatooyinka haweenka", iyo sidoo kale in lagu xoqdo cunnooyin xannuun leh oo afka lagu dhaqo.
Faleerka waxaa loo diyaariyaa sida waafaqsan mabda'ida shaaha: caleemaha waxaa lagu shubay biyo karkaraya waxayna ku adkeeyeen 3-4 saacadood in ay noqoto xaalad shaah oo xoog leh. Codso taladan waa in ay ahaato mid diirran, waxaa lagugula talinayaa in aad isla markiiba isticmaasho oo aadan ku keydinin qaboojiyaha.
Tiro lambar 5
Popular waa isticmaalka abuurka ah ee daaweynta cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka. Qaado shaah ah oo abuur ah (oo kaliya laga soo ururiyey dhirta, laakiin aan iibsan!) Ku tiri si fiican oo leh galaas biyo la kariyey.
Carruurta, waxaad samayn kartaa decoction ah ee abuurka: karkari qanjaruufo abuurka ah ee galaas biyo ah, qabow oo siiyo cabitaan. Habkani waa mid aad u dabacsan jirka jirka.
Contraindications iyo saameynaha dhinaca
Isticmaalka sorrel faras ma noqon karo haweenka uurka lehsidoo kale dadka qaba xanuunka kelyaha oo daciif ah.
Ku guuldareysiga inaad u hoggaansanto qiyaasta isticmaalka sorrel faras ee carruurta waxay u horseedi kartaa sumeyn, oo ay weheliso matag, shuban.
Ma taqaanaa? Isticmaalka badan ee sorrel faras wuxuu noqon karaa mid la qabatimo, ka dibna muddo ka dib jidhku kama jawaabi doono daaweynta.
Dhowaan, saynisyahannadu waxa ay xiiseynayeen sida sorrelku u saameeyo cadaadiska bini aadamka, waxaana la ogaaday in dadka u nugul yahiin hypotension waa inay isticmaalaan sorrel, aad u taxadar leh, sida dhakhtar soo qoray, si sax ah loo raaco qiyaasta.
Sida aad u arki karto, geedkaan fudud wuxuu ogaanayaa caansanaanta noocaas ah. Sarsobka Horse wuxuu bogsiin karaa ama ka ciyaari karaa kaalin "taageeraya" ee daaweynta cudurka. Muuqaal muuqaal ah, ee ka kooban kiimikada, waa mid ka mid ah sifooyinka daawooyinka ugu qanisan ee dhirta, isticmaalka kaas oo si weyn u faa'iideysan doonaa jirkaaga.